Oromoon qormaanni saa dabrees ammas hegeeres inni guddan Tokkumaa waliin waliitti hidhata. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsOromoon qormaanni saa dabrees ammas hegeeres inni guddan Tokkumaa waliin waliitti hidhata.
Oromoon qormaanni saa dabrees ammas hegeeres inni guddan Tokkumaa waliin waliitti hidhata.
Warri Minilik ADP hadheessanii abaaraa fi salphisaa oolu. Akkasuu tahee ADPiin harka wayyaa jalaa qofaan osoo hin taane harka wayaa alaan (ifatti) finxaaleyyii isaanii waliin hojjeta. Inumaa qondaalota ADP fi ABN addaan foo’aanii beekuun amma rakkisaa tahee jira. Kana OPDOnuu ni beeyti.
– Kaayyoon ADP fi finxaaleyyii isaanii tokkoomsee OPDO fi sabboontota Oromoo walitti diinomse maali?
– ADP fi finxaaleyyiin jaraa naannoo isaaniirra dabree guutuu biyyaatti abbaa tahuuf yoo wal tahan sabboontonni Oromoo Oromiyaan alatti nama dhiibuuf osoo hin taane ‘Oromiyaa irratti Oromoon dhugumaan abbaa tahuu qaba’ jedhaniif qofa maaliif OPDOdhaan ajjeefamu, hidhamu?
– ADPiin yoo finxaaleyyii isaa ijaaree (qawwee raabsuufii dabalatee) of duuba hiriirsu OPDOn Oromoota qaqqaalii ishiidhaafuu abdii tahan hidhuu fi ajjeesuu bira dabartee maqaa jibbaa ”ONEG SHANE” jedhu itti maxxansuun maaliif Oromootti xannacha hin fayyine itti taate?
Gaaffiileen hadhooftuun kun deebiilee hadhooftuu barbaadu.
HUB: ‘Warra gamaatiin ADP yoo jette warra gamanaatiin maaliif ODP jechuu diddee OPDO jetta’ jedhee kan na gaafatu yoo jiraateef deebiin kunooti:
Nama bifaa fi amala isaa laalanii maqaa isa fakkaatuun waamu.
Balfa ofirraa dhiqus akan ofitti laaqus abbaa dha.
Tokkumaa kessaa nageenyi, dimookrasin, guddinii, misoomni fi waliin jireenyi jira. Tokkumaa jechun wan tokko dhugnaa tokko nyannaa tokko uffaanaa takka dubbaanaa yeroo tokko rafnee yeroo takka haa kanuu miti. Qalbii qulquullun Dantaa Waaloo irraatti wal utuubun waliin dhabbachudha. Nuti diini keenya enyuu? Essaa jira yoo jenne walttajji tokkoraa teenye, inni tokko diinni keenya Nafxaanyaa jedha, inni kun Tramp jedha, kun AlSisi jedha fi kkf hedduu jira. Essaa jira yoo jettes dinni Waaloo keenya kun Iran kessa jira jedha, kun Iraq jedha.
Kuun ammo Iraq Iraq kessa jirti wan tahef lachuuti jedha. Hubaadhu yeroon hagana dhagaa bu’uura kahaame ta’u miti haali heddun osuuma nuti kanan wal gangaalchinu jijjiiramaa deema kananis ofiis butuutne wal butuchu ala homaa hin fidne hin fidnus. Marata tokkotu jaarsi tokko Yaa gurbaa koo maaltu sii marache jennan? Yaa abba koo wanti naa marache qoorii takka kessati nyaata qopheessen dhiqaanne qoorii san kessa waliin bakka takka nyaanna jedhen Oromuuma tana dadhaabe saantu naa marache jedhe.
Oromoon obboolessa satiifu Hinaafa bareeche hinaafu yeroo warri isaa jibban ykn keyrii saba kana argaa fi dhageetti jibbaan otuu kana fatti hinaafne waliin tokko tanee hegeeren Oromoo, Oromiyaa fi biyyaa kanaleen bu’uura hin sochoonne irraati Dhabbata. Ormii kun bagaa tokko tahan haa jabaatan nutis tokkumaa nuu barbaachisa achi kessa nageenya, dimookrasi fi guddinaa ittifufiinsa qabu hammaarachu dandeenya wan tahef. Kanan alaa digrii 360 miti 720 fignuullee xumuurri keenya Zero Sum Game tahun saa gaffii hin barbaachisu. Yaada dhunfa kooti.
Who is Yaasoo Kabbabaa Hordofaa??
Obbo Lidatuu :Tigraay keessaa woraanni Isaayyaas akka bahu gochuu danda’uu qabna.